ချောက်ကမ်းပါး ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူနေအိမ်နှင့် အဆောက်အဦးများ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingချောက်ကမ်းပါး ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူနေအိမ်နှင့် အဆောက်အဦးများ
ချောက်ကမ်းပါး ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူနေအိမ်နှင့် အဆောက်အဦးများ
September 28, 2021 Yan Amazing Comments Off on ချောက်ကမ်းပါး ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူနေအိမ်နှင့် အဆောက်အဦးများ
ပရိသတ်ကြီး ဒီတစ်ခါ ပြောပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ချောက်ကမ်းပါး ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူနေအိမ်နှင့် အဆောက်အဦးများ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆောက်လုပ်ရေး ဗိသုကာ ပညာရှင်တွေဟာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ပထဝီဝင် အနေအထား တစ်ခုမှာ ဘယ်လိုပုံစံ နဲ့ ရအောင် ဖန်တီး တည်ဆောက်ပြသွားလဲ ဆိုတာ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ မြစ်ရဲ့ အလှအပကို ခံစားနိုင်ဖို့အတွက် ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်
အခု ပထမဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ ဝါရှင်တန် မြို့ က Hood တောင်ပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအိမ်ကိုတော့ (၂၀၁၅) ခုနှစ်မှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ကာ ဒီဇိုင်းဆွဲပေးတဲ့ ဗိသုကာ ပညာရှင်ကတော့ Giulietti/Schouten AIA က ရေးဆွဲထားတာပါ ။ ဆောက်လုပ်တဲ့ အခါမှာလည်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က သစ်ပင်တွေ နဲ့ ကျောက်သားတွေကို အထိခိုက်နည်းအောင် စီစဉ်ခဲ့ပြီး သစ်သားအိမ် ပုံစံမျိုးကို အခြေခံယူပြီး ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ စပိန်တောင်ကုန်း ပေါ်က အိမ်လေး
ဒုတိယ ပြောပြမယ့် အိမ်လေးကတော့ စပိန်နိုင်ငံက တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ အိမ်လေးရဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံကိုတော့ GilBartolomé ဗိသုကာ ပညာရှင်တွေက ရေးဆွဲထားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ( ၄၂ ) ဒီဂရီ စောင်းနေတဲ့ Andalusian ကမ်းခြေက တောင်စောင်းလေး တစ်ခုပေါ်မှာ ဆောက်ထားတာပါ ။ ထူးခြားချက် တစ်ခုကတော့ မြေအောက်ခန်း တစ်ခန်း ပါ ပါဝင်ပြီး မြေဆီလွှာ ရဲ့ အပူချိန်ဟာ ( ၆၇ ) ဒီဂရီ ရှိတာကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သက်တောင့်သက်သာ နေနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ ဗာဂျီးနီးယား တောင်ကုန်းပေါ်က အိမ်လေး
တတိယ ပြောပြမယ့် အိမ်လေးကတော့ ဗာဂျီးနီးယား ပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ အိမ်လေး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအိမ်လေးကိုတော့ Falling Waters အနားက တောင်စောင်းတစ်ခုမှာ ဆောက်ထားပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က ရှုခင်းတွေရဲ့ အလှကို တတ်နိုင်သလောက် အနှောင့်အယှက် မဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အိမ်ရဲ့ အရှေ့မျက်နှာပြင် တစ်ခုလုံးကို ခိုင်ခံ့တဲ့ မှန်တွေနဲ့ အလှဆင်ပေးထားကာ သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အခုမြင်နေရတဲ့ အိမ်လေးကို ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး တည်ဆောက်ပေးထားတာကတော့ Wiedemann က ဗိသုကာ ပညာရှင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ သဘာ၀ အလှအပတွေကို ခံစားရနိုင်မယ့် အိမ်လေး
ဒီတစ်ခါ ပြောပြပေးမယ့်‌ အိမ်လေးကတော့ တောင်စောင်း ပေါ်မှာမှ ကိုယ်ပိုင် စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ပြီး ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအိမ်လေးကတော့ ဝါရှင်တန် ပြည်နယ်ထဲမှာ တည်ရှိ ပြီး ဘေးပတ်လည်မှာတော့ ကျွန်းစုလေးတွေ အပြင် အိုလံပစ်တောင်တန်း ရဲ့ အလှအပတွေကိုပါ ခံစားကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ ။ ဒါ့အပြင် အိမ်ရဲ့ ဘေးပတ်ပတ်လည်တွေမှာ မြင့်မားတဲ့ သစ်ပင်များစွာ ဝန်းရံနေပြီး အတွင်းပိုင်းမှာတော့ အိပ်ခန်း ( ၂ ) ခန်း နဲ့ ရေချိုးခန်း တစ်ခန်း တို့ ပါဝင်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး အိမ်အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်လည်း ( ၂.၅ ) ဧက ကျယ်ဝန်းတဲ့ မြေကွက်လပ်ထဲမှာ တင်းနစ် ကွင်း နဲ့ ရေကူးကန် တစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်း တည်ဆောက်ပေးထားပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ကျောက်ဆောင်ပေါ်က အိမ်
အခုနောက်ဆုံး ပြောပြပေးမှာတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်း က ကျောက်ဆောင် တစ်ခုပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအိမ်ကိုတော့ ( ၁၉၆၄ ) ခုနှစ်တုန်းက တည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အိမ်ထဲကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ အလှအပကို ကောင်းစွာ မြင်ရတာကြောင့် ဒီအိမ်လေးကို “Glass House” လို့ နာမည် ပေးခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပြီး အိမ်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာဆိုရင် အိပ်ခန်း ၊ ရေချိုးခန်း နဲ့ မီးဖိုချောင်ခန်းတို့ပါဝင်ပြီး တစ်ခြားသော အိမ်တွင်း အလှအဆင် ပစ္စည်းတွေလည်း ပါရှိပါသေးတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ ဒီအိမ်လေးရဲ့ တန်ဖိုးက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ( ၃.၉ ) သန်း တန်ကြေးရှိပါတယ်တဲ့ …. shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ ချောက်ကမ်းပါး ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူနေအိမ်နှင့် အဆောက်အဦးများ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ပုံမှန် အရွယ်အစားထက် ကြီးမားလွန်းနေတဲ့ အကောင်ကြီးများ
သိပ္ပံပညာရှင်တွေ လုံးဝအဖြေရှာမရသေးတဲ့ ထူးဆန်းသော ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများ